War saxaafadeed: Soo-bandhigidda Maxaabiistii Lagu Qabtay Hawlgaladii iyo Dagaalkii magaalada Galkacyo. – Radio Daljir
Seteembar 5, 2011 12:00 b 0
Dawladda Puntland ayaa maanta si rasmi ah usoo bandhigaysa Maxaabiistii lagu qabtay Howlgaladii iyo Dagaalkii horaanta bishaan ka dhacay Magaalada Galkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Ciidamada Amniga ee Puntland oo todobaadyadii ugu dambeeyey howlgalo ka waday Magaalada Galkacyo ayaa gacanta ku dhigay maxabiis tiro badan oo ka tirsan kooxda argagaxisada ah ee Al Shabaab, qaarkoodna
lagu qabtay dagaalkii Galkacyo ka dhacay 1-da ilaa 2-da bisha September 2011.
Ciidamada Amniga ayaa Maxaabiistii lasoo xirxiray qaarkood waxay ka soo qabqabteen guri ku yaala xaafada Garsoor ee Magaalada Galkacyo, iyadoo xubno ka tirsan kooxda argagaxisada ah ay shir ku lahaayeen gurigaas. Sida Dowladdu xogta ku heyso, xaafada Garsoor ayaa in muddo ah noqotay saldhig laga soo abaabulo dilalka iyo qaraxyada qorsheysan ee ka dhaca guud ahaan Puntland laguna bartilmaameedsado waxgaradka iyo mas?uuliyiinta Reer Puntland.
Markii lasoo qabqabtay Maxabiista badankood waxay dagaal fool-ka-fool ah kula jireen Ciidamada Dowladda Puntland oo howlgalo lagu sugayo amniga ka waday xaafadaha Magaalada Galkacyo.
Waxaa xusid mudan in maxaabiis kale ay ku xiran yihiin xabsiyadda Galkacyo waxaana la xaqiijiyay xubno Al Shabaab ah oo ku dhintay xarumaha caafimaadka jeebabkooda laga helay rasaas, iyadoo kuwa dhintay iyo kuwa lasoo xirayba ay u kala dhashay dhammaan gobollada Somalia.
Eeg lifaafa: Liiska Magacyadda Maxaabiista
Wasaaradda Amniga & DDR